သင်၏ဝဘ်ဆိုက်ကို WordPress ဖြင့်တည်ဆောက်ရန်အကြောင်း ၁၀ ချက် | Martech Zone
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသစ်တစ်ခုဖြင့်သင်တို့အားလုံးသည်ဈေးကွက်ထဲ ၀ င်ရန်အဆင်သင့်ဖြစ်နေသော်လည်း website တစ်ခုပျောက်ဆုံးနေသည်။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုသည်သူတို့၏အမှတ်တံဆိပ်ကိုမီးမောင်းထိုးပြပြီးဆွဲဆောင်မှုရှိသော ၀ က်ဘ်ဆိုက်တစ်ခု၏အကူအညီဖြင့်ဖောက်သည်များအားသူတို့၏တန်ဖိုးများကိုချက်ချင်းပြသနိုင်သည်။
ယနေ့ခေတ်တွင်အလွန်နှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းသောဝက်ဘ်ဆိုက်ရှိခြင်းသည်မဖြစ်မနေလိုအပ်သည်။ ၀ က်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုတည်ဆောက်ရန်ရွေးချယ်စရာများကဘာလဲ။ အကယ်၍ သင်သည်စီးပွားရေးစွမ်းဆောင်ရှင်တစ် ဦး ဖြစ်လျှင်သင်၏အက်ပလီကေးရှင်းကိုပထမဆုံးအကြိမ်တည်ဆောက်လိုလျှင် WordPress သင်၏လိုအပ်ချက်များကိုကုန်ကျစရိတ်သက်သာသည့်နည်းလမ်းဖြင့်ပြီးမြောက်စေနိုင်သည်။
အောက်ပါအကြောင်းပြချက် (၁၀) ခုကိုလေ့လာကြည့်ကြစို့။ ဒီပြောင်းလဲနေတဲ့စျေးကွက်ထဲမှာမင်းရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆက်လက်ရှင်သန်နိုင်ဖို့ WordPress ကဘာကြောင့်အရေးကြီးတယ်ဆိုတာကိုဆန်းစစ်ကြည့်ရအောင်။
၀ က်ဘ်ဆိုက်ကို WordPress ဖြင့်ကုန်ကျစရိတ်သက်သာသည့်နည်းလမ်းဖြင့်တည်ဆောက်ပါ။ WordPress သည်အခမဲ့ဖြစ်သည်။ ဟုတ်ကဲ့! အဲဒါအမှန်ပါပဲ။ စီးပွားဖြစ်ကွန်ရက်စာမျက်နှာတခုခုကိုသင်လိုလားတယ်၊ (သို့) ကိုယ်ပိုင်ဘလော့ဂ်တင်areaရိယာတခုလိုချင်တယ်ဆိုရင်အရေးမကြီးဘူး၊ တကယ်တော့ WordPress ဟာအပို (သို့) လျှို့ဝှက်စွဲချက်တွေမယူထားဘူး။ အခြားတစ်ဖက်တွင်၊ WordPress သည်သင်၏အရင်းအမြစ်ကုဒ်ကိုတိုးတက်စေရန်သို့မဟုတ်ပြုပြင်ရန်ခွင့်ပြုသည့်ပွင့်လင်းသောအရင်းအမြစ်လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာသင့်ဝက်ဘ်ဆိုက်၏အသွင်အပြင်သို့မဟုတ်လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုအလွယ်တကူစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်နိုင်သည်။
အသုံးပြုရလွယ်သောမျက်နှာပြင် - WordPress သည်နည်းပညာနှင့်နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာမဟုတ်သူအားလုံးအတွက်ကူညီရန်လွယ်ကူသောနည်းလမ်းဖြင့်ဖန်တီးထားသည်။ ၎င်းသည်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးရှိ WordPress ဝယ်လိုအားအလွန်ကြီးမားရခြင်း၏အဓိကအကြောင်းရင်းဖြစ်သည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, WordPress ကိုအသုံးပြုရန်လွယ်ကူသည်နှင့်အသုံးပြုသူများသည်၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်ဝက်ဘ်စာမျက်နှာများ၊ ပို့စ်များ၊ မီနူးများကိုအနည်းဆုံးအချိန်အပိုင်းအခြားအတွင်းဖန်တီးရန်ခွင့်ပြုသည်။ သင်ကလူတွေကိုအလုပ်ပိုလွယ်အောင်ပြောနိုင်တယ်
အခမဲ့အခင်းအကျင်းများနှင့် Plugins များကိုဒေါင်းလုတ်ရန်လွယ်ကူသည် - WordPress ၏ပံ့ပိုးမှုဖြင့်သင်၏ ၀ ဘ်ဆိုဒ်ကိုကုန်ကျစရိတ်သက်သာသည့်နည်းလမ်းဖြင့်ဖန်တီးနိုင်သည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ဖော်ပြပြီးဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်သင့်တွင်စိတ်ပူစရာမလိုပါ၊ အထူးကောင်းမွန်သော WordPress ဗားရှင်းမရှိပါကဤနေရာတွင်ရာပေါင်းများစွာသောအခမဲ့အခင်းအကျင်းများနှင့် plugins များကိုသင့်ဝက်ဘ်ဆိုက်အတွက်အလွယ်တကူ download နိုင်သည်။ သင့်တော်သောအခင်းအကျင်းတစ်ခုကိုသင်အခမဲ့ရှာဖွေပါကသင်၏ဒေါ်လာရာပေါင်းများစွာကိုကယ်တင်နိုင်သည်။
WordPress ကိုအလွယ်တကူစကေးနိုင်သည် - ထိရောက်သော ၀ က်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုတည်ဆောက်ရန်အတွက်သင်သည်ဒိုမိန်းတစ်ခုဝယ်ယူရန်လိုအပ်သည်။ ဒိုမိန်းအမည်တစ်နှစ်လျှင်ဒေါ်လာ ၁၀ ဝခန့်ကျသင့်သောအခါ hosting အတွက်ကုန်ကျငွေမှာတစ်လလျှင် ၅ ဒေါ်လာဖြစ်သည်။ အခြေခံအားဖြင့် WordPress သည်သင်၏လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်ကိုချဲ့ထွင်နိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်သင်သည်လုံလောက်သောအသွားအလာသို့ရောက်သောအခါသို့မဟုတ်သင်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်ကိုချဲ့ထွင်လိုလျှင်အားမသွင်းနိုင်ပါ။ ၎င်းသည်ဗီဒီယိုဂိမ်းဝယ်ယူပုံနှင့်တူသည်။ သင်၌ရှိပါက၎င်းကိုအသုံးပြုရန်မည်သူမျှမတားဆီးနိုင်ပါ။
အသုံးပြုရန်အဆင်သင့် - WordPress ကိုထည့်သွင်းပြီးသည်နှင့်သင်၏အလုပ်ကိုချက်ချင်းစတင်နိုင်သည်။ ၎င်းသည်မည်သည့်ဖွဲ့စည်းပုံမျှမလိုအပ်ပါ။ ၎င်း မှလွဲ၍ သင်၏အခင်းအကျင်းကိုအလွယ်တကူစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်နိုင်သည်သာမကသင့်လျော်သော plug-in ကိုလည်းအသုံးပြုနိုင်သည်။ လူမှုမီဒီယာသတင်းများ၊ မှတ်ချက်များနှင့်အခြားအရာများကိုညှိနှိုင်းနိုင်သည့်အလွယ်တကူတပ်ဆင်ရန်သင်သင်ရှာဖွေနေသည့်အချိန်အများစုသည်
WordPress သည်အဆက်မပြတ်တိုးတက်နေသည် - ပုံမှန်မွမ်းမံမှုများသည်လုံခြုံရေးအတွက်သာမဟုတ်ပါ။ အသုံးပြုသူများအားလုံးအတွက်ပလက်ဖောင်းကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေသည့်အဆင့်မြင့်အင်္ဂါရပ်များကိုသူတို့အဆက်မပြတ်ပေးသည်။ ထို့အပြင် developer များကျွမ်းကျင်သူအဖွဲ့သည်အသုံးပြုသူများကိုအထင်ကြီးစေရန်အသစ်နှင့်ကွဲပြားခြားနားသော plug-in များကို update လုပ်နေကြသည်။ နှစ်စဉ်သူတို့စိတ်ကြိုက်အင်္ဂါရပ်များမိတ်ဆက်နှင့်အသုံးပြုသူများကသူကလေ့လာစူးစမ်းဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်။
မျိုးစုံမီဒီယာအမျိုးအစားများ - လူတိုင်းကသူတို့ ၀ က်ဘ်ဆိုက်တွင်ပါ ၀ င်သောအကြောင်းအရာများကိုကြွယ်ဝစွာဆွဲဆောင်လိုသည်။ တဖန်သင်တို့ "ကျွန်တော်တို့အကြောင်း" စာမျက်နှာတွင်ပိုမိုသောအချက်အလက်များကိုထည့်သွင်းရန်ဆန္ဒရှိသည်။ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ဗွီဒီယိုတစ်ခု (သို့) ဓာတ်ပုံပြခန်းတစ်ခုပါ ၀ င်မယ်ဆိုရင် ၀ က်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုကပိုပြီးဆွဲဆောင်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ဟုတ်ကဲ့! WordPress သည်၎င်းတို့အားစွဲမှတ်စရာကောင်းသောနည်းလမ်းများဖြင့်ချောမွေ့စွာထည့်သွင်းရန်ရွေးချယ်မှုကိုပေးသည်။ သင်သည်ပုံဆွဲ။ ဆွဲယူရန်လိုအပ်သည် (သို့) သင်ရွေးချယ်ထားသောဗီဒီယို၏လင့်ခ်ကိုကူးယူကူးယူနိုင်သည်။ ၎င်းသည်အနည်းဆုံးအချိန်ကာလတစ်ခုအတွင်းပေါ်လာလိမ့်မည်။ ထို့အပြင် .mov, .mpg, mp3, .mp4, .m4a.3gp, .ogv, .avi, .wav, .mov, .mpg ကဲ့သို့သောဖိုင်အမျိုးအစားအမျိုးမျိုးကိုသင်ထည့်သွင်းနိုင်သည်။ သင်ကသင်လိုချင်တာတွေကိုအကန့်အသတ်မရှိလွှတ်တင်လို့ရပါတယ်။
အကြောင်းအရာများကိုအချိန်တိုအတွင်းထုတ်ဝေပါ - သင်၏ post ကိုအမြန်ဆုံးထုတ်ဝေလိုပါက WordPress သည်သင်တစ်နေရာတည်းသောဖြေရှင်းချက်ဖြစ်သင့်သည်။ သင်၏မောက်စ်ကိုအနည်းငယ်နှိပ်ရုံဖြင့်အကြောင်းအရာများကိုမှော်အတတ်ဖြင့်ထုတ်ဝေနိုင်သည်။ ထို့အပြင်သင်၏လက်ကိုင်ဖုန်းတွင် WordPress အက်ပလီကေးရှင်းရှိပါကသင်၏စာမူကိုဘယ်နေရာမဆို၊ အချိန်မရွေးထုတ်ပြန်နိုင်သည်။
HTML Code မှာရှုပ်ထွေးမှုရှိလား။ - HTML သည်လူတိုင်း၏လက်ဖက်ရည်ခွက်မဟုတ်ပါ။ သို့သော် WordPress သည် HTML ကိုအထောက်အပံ့မပါပဲသင်၏ပို့စ်ကိုသင်တင်နိုင်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည် HTML ကိုမသိဘဲသင်၏စာမျက်နှာများကိုဖန်တီးနိုင်ပြီးသင်၏ပုံမှန်ပို့စ်များကိုထိန်းသိမ်းနိုင်သည်။
၎င်းသည်အလွန်လုံခြုံပြီးယုံကြည်စိတ်ချရသော - WordPress သည်သင်၏လုံခြုံရေးဆိုင်ရာပြissuesနာများကိုလည်းကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနိုင်သည့်အားကောင်းသော web development platform တစ်ခုဖြစ်သည်မှာသေချာသည်။ WordPress သည်ပုံမှန်မွမ်းမံမှုများနှင့်သင့်အတွက်လုံခြုံသောပတ်ဝန်းကျင်ကိုထိန်းသိမ်းသောဝက်ဘ်ဆိုက်လုံခြုံရေးပြင်ဆင်ဖာထေးမှုများကိုမီးမောင်းထိုးပြသည်။ အခြေခံကြိုတင်ကာကွယ်မှုများနှင့်သင်၏ WordPress ဝဘ်ဆိုဒ်ကိုဟက်ကာများမှအလွယ်တကူစီမံနိုင်သည်။
မင်းသိတဲ့အတိုင်း, WordPress ပုဂ္ဂိုလ်ရေးသို့မဟုတ်စီးပွားဖြစ်က်ဘ်ဆိုက်သည်။ ၎င်းသည်သင်၏ပါဝင်သည့်အကြောင်းအရာစီမံခန့်ခွဲမှုလုပ်ငန်းစဉ်ကိုလိမ္မာပါးနပ်စွာဖြေရှင်းပေးပြီးမည်သည့်အကန့်အသတ်မရှိဘဲလွတ်လပ်စွာထုတ်ဝြေခင်းကိုခွင့်ပြုသည်။ သင်၏ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုတည်ဆောက်လိုပါက၎င်းကိုတည်ဆောက်ရန်လုံလောက်သောပမာဏမရှိပါက WordPress သည်သင်၏တစ်နေရာတည်းသောဖြေရှင်းချက်ဖြစ်လိမ့်မည်။ သင်၏ကိုယ်ပိုင်ဝဘ်ဆိုက်ကိုကုန်ကျစရိတ်သက်သာသည့်နည်းလမ်းဖြင့်ဖန်တီးနိုင်သည်။ ဤဆောင်းပါးသည် WordPress ၏အကျိုးကျေးဇူးများနှင့်အရေးပါမှုအကြောင်းဤအကြံဥာဏ်ကိုပေးလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်။
Tags: အကြောင်းအရာစျေးကွက်အယ်ဒီတာhtmlမာလ်တီမီဒီယာအမျိုးအစားများplugins ကိုသုံးစွဲဖို့အဆင်သင့်စိတ်ချရသောစကေးလုံလုံခြုံခြုံthemes များအသုံးပြုသူ - ဖော်ရွေ interface ကိုWordPress